I-Turkish Airlines kunye neBelavia ayisayi kuphinda ibhabhe abafuduki base-Iraq, baseSyria naseYemeni baye eBelarus
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Turkish Airlines kunye neBelavia ayisayi kuphinda ibhabhe abafuduki base-Iraq, baseSyria naseYemeni baye eBelarus
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
I-Turkish Airlines kunye neBelavia ayisayi kuphinda ibhabhe abafuduki base-Iraq, baseSyria naseYemeni baye eBelarus.
Ngokuhambelana nesigqibo sabasemagunyeni abafanelekileyo baseTurkey, ukuqala ngoNovemba 12, 2021, abemi base-Iraq, eSiriya naseYemen abayi kwamkelwa ukuba bahanjiswe ngeenqwelomoya ezivela eTurkey ukuya eBelarus.
Inqwelomoya yelizwe laseBelarusian ayizukuvumela abafuduki baseIraq, baseSyria naseYemeni ukuba bakhwele iinqwelomoya ukusuka eTurkey ukuya eBelarus.
I-Turkish Airlines ayizukuthengisa amatikiti okubhabha eBelarus kubahlali base-Iraq, eSyria naseYemen.
I-European Union ibeka uxanduva lweengxaki zokufuduka ngokungekho mthethweni ngokuthe ngqo kunye nozwilakhe waseBelarusian uLukashenko.
Ngaphantsi kwesoyikiso sezohlwayo ezongezelelweyo, umphathiswa weflegi yelizwe laseBelarusian, IBelavia, ibhengeze ukuba iyekile ukwamkela abemi base-Iraq, eSiriya naseYemen kwiinqwelomoya zabo ezisuka eTurkey ukuya eBelarus.
"Ngokuhambelana nesigqibo sabasemagunyeni abafanelekileyo baseTurkey, ukuqala nge-12 kaNovemba ka-2021, abemi base-Iraq, eSiriya naseYemen abasayi kwamkelwa ukuba bahanjiswe ngeenqwelomoya ukusuka eTurkey ukuya eBelarus," IBelavia Ingxelo yenkonzo yeendaba ifundeka.
Ngaphambili, Airlines Turkish Kwakhona yazisa ukuba ayiyi kuthengisa amathikithi eenqwelo-moya eziya eBelarus kubahlali base-Iraq, eSiriya naseYemen, banikwe ingxaki yokufuduka ngokungekho mthethweni kumda waseBelarusian-Polish.
Ukwahluka kuya kwenziwa kuphela kubakhweli abaneepasipoti zozakuzo.
Ingxaki yokufuduka kwimida yaseBelarusian kunye neLatvia, iLithuania kunye nePoland, apho abafuduki abangekho mthethweni baqala ukuthontelana ukususela ekuqaleni kwalo nyaka, bangena kwi-high gear ngoNovemba 8.
Abantu abangamawaka aliqela basondela kumda wasePoland kwicala laseBelarusian baza bazama ukuwela ukuya ePoland. Ngelinge lokugqogqa kumda bophula ucingo oluhlabayo.
Amazwe aseYurophu (i-EU) abeke uxanduva lokunyuka ngamabomu kwingxaki yabafuduki abangekho mthethweni ngokuchanekileyo kunye noMinsk kunye nozwilakhe waseBelarusian uLukashenko, kwaye wabiza izigwebo ezingaphezulu.